Xildhibaan Xiddig: "Shir baan qabsanaynaa, guddoon baan dooranaynaa." - Home somali news leader
Somali’s Parliament dissolved, followed by chaos
Somalia: Regional Leaders Meet in Mogadishu
Specialists handle famous stained glass windows
The gig-economy film “Nomadland” wins four BAFTA awards, including best picture
Israel says it will work closely with the United States on…
The leading French publisher asks prospective writers to stop submitting manuscripts
Jordan’s Abdullah shows up with half-brother for the first time since…
Home NEWS Xildhibaan Xiddig: “Shir baan qabsanaynaa, guddoon baan dooranaynaa.”
Xildhibaan Xiddig: “Shir baan qabsanaynaa, guddoon baan dooranaynaa.”
Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xiddig oo ka mid ah 15ka xildhibaan ee uu guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya ka joojiyay inay kaqeybgalaan shan kulan oo baarlamaanku yeelanayo ayaa sheegay inay dooranayaan guddoon kale.
Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xiddig ayaa sheegay in inaysan jirin wax laga mamnuucay laakiin ay arkeen warqadda ka soo baxayday,haddii uu guddoonka ku adkeysto go’aankaasi uu baarlamaanka xirmayo.
“Aqalka Sare hadda wuu xiran yahay, oo mushkilad ka dhex abuurantay ayuu u xiran yahay, dabcan Golaha Shacbkana wuu xirmayaa”ayuu yiri xildhibaan Xiddig oo u waramayay laanta afka soomaaliga ee BBCda.
“Annagu dagaalmi mayno laakiin nidaamka sharciga ah baan ku taagannahay dhibna malahan in laba baarlamaan ay shiraan, annaguna shir baan qabsanaynaa, guddoon baan dooranaynaa ee shaqaan qabanaynaa.”ayuu sii raaciyay xildhibaanku.
Xildhibaan Xiddig ayaa ku tilmaamay warqada ka soo baxday guddoomiyaha baarlamaanka mid aan macno sameyneyn maadaama baarlamaanka iyo guddoonka hadda jooga hawl iyo shuruuc ay hadda qabaan karaan.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ganaax shan kulan ah dul-dhigay 15-Xildhibaan oo ku eedeysan is hor istaag fadhiga
Baarlamaanka uu shalay ku lahaa Muqdisho kadib markii Xildhibaannadaas ay muujiyeen shaki la xiriira in waqti kororsi loo sameynayo Dowladda muddo xileedkeeda dhammaaday.
Previous article5,000 people attend Barcelona’s rock concert after taking Covid-19 quick tests
Next articleMozambique called for “rapid relocation to protect civilians” after jihadists seize the city
Tallaalka Covid 19 ee lagu farsameeyay Shiinaha oo Muqdisho la keenay
Maxaabiis loo haysto burcad badeednimo oo Muqdisho laga soo dejiyay
Ra’iisul Wasaare Rooble oo isku bedelay Wasiirada labo Wasaaradood